Sodoma ": WADAJIRKA KALA DUWAN VATICAN - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DIINTA "Sodoma": WADAJIRKA KAALMADA VATICAN.
Sodoma ": WADAJIRKA KALA DUWAN VATICAN
"Sodoma", ama qarsoodiga qoyska Vatican
Published 19 / 02 / 2019 in 18h13 - beddelmay 19 / 02 / 2019 si 18h13Jean-Pierre Denis
Waxaan akhrinaa wadada Frederic Martel. Xaqiijin: Lakulma, laakiin cadeeyay.
ABONNEZ-VOUSLaga soo bilaabo:1 €
Ka danbeeya facade, Kaniisadda Kaatooliggu maaha wax qurux badan. Bogagga 630 ayaa baaray, laynaga wuxuu sheegaa afar sano oo baaritaan ah (ku tiirsan) Vatican iyo soddon waddan. Saxafiga Faransiiska Dhaqanka, hore u ogaaday tijaabooyin hufan sida Awooda Soft, Qoraaga ayaa u baxay inuu la kulmo wadaaddo badan, hoggaamiyayaal kiniisad ah iyo ra'iisul wasaare Dhamaadkii safarkan oo ku yaal boogaha mugdiga ah iyo daaraha fadeexadda, Frédéric Martel wuxuu xaqiijinayaa in hay'adda Katooliguna ay tahay "Mid ka mid ah jaaliyadaha ugu badan ee khaniisiinta ah ee dunida". Naftiisa naftu waa khaniisaa, oo naftiisa u soo bandhigaysa diinta, wuxuu doonayaa inuu soo bandhigo labawejiimiga oo ka talagalay siminaarada ilaa kan sare ee hay'adda. "Homophobia" inta badan la muujiyo waxay noqon doontaa shaashadda a "Homofily" la ceejiyo ama la dhaqmo.
Intaas waxaa sii dheer hadalka hadalka ee ku saabsan hindida khaniisnimada waxa uu noqon lahaa jeermis, waxa u badanaaba inuu soo jiidan doono sababtoo ah waa la gowracay. Qarsoodiga qoyskani wuxuu kobcin doonaa musuqmaasuqa iyo kor u qaadida xasaasiyad la'aanta galmada. Jiritaanka shabakadaha, ama halkii, sida Martel sheegay, a "Rhizome", waxay noqon kartaa arrin wax ku ool ah oo ku saabsan fahamka sababta ay hay'aduhu u dhib badan yihiin la dagaallanka musuqmaasuqa iyo xadgudubka galmada. Asal ahaan, qof kastaa wuxuu ilaaliyaa qarsoodiga qarsoodiga ah ee kale si uu u ilaaliyo naqshadeeda ama caadooyinka yaryar. Sababta ayaa ah mid dhib badan, laakiin xidhxidhka qaybaha warbixinta waa mid awood leh.
Waa dhif in heerkan oo kale ah ee baaritaan lagu sameeyo qaab nidaamsan.
Badanaa waa mid aad u adag ama qallafsan, sheekadu waxay naga dhigeysaa in aan galno wareegyada awoodda korantada. Waa, waa in la sheegaa, inta badan "la duubay". Waa dhif in heerkan oo kale ah ee baaritaan lagu sameeyo qaab nidaamsan. Shaqadu maaha dhar fudud oo sheekooyin ah. Waa buug culus, oo ah in si dhab ah loo akhriyo. Qoraaga ayaa u muuqda inuu miiska saaran yahay iyo meelo uu furan yahay oo ku yaal Vatican, hay'ad wali la aqoonsan yahay hermetic. Dabcan, Martel maaha kan ugu horreeya ee si xoog leh u beeninaya been abuurka iyo musuqmaasuqa kaniisadda.
Dabcan, qaar badan oo ka mid ah horumarkiisa ma ahan, si adag u hadal, muujinta, tusaale ahaan taageerada loo yaqaan 'Pinochet'. Iyo kuwo kale, gaar ahaan Faransiiska, waxay u jeedaan faafinta, fikriga ama fikradaha. Sawirka uu ku sawiranyahay uma badna inuu ku qasbo inay ku adkeeyaan Catholics daacad ah oo leh muuqaal ama khibrad kale oo ka mid ah kaniisadda. Martel wuxuu cambaareeyay a "Sharciga musuqmaasuqa agagaarka John Paul II. Waayo, qoraal ahaan waa in aynaan haysan waxa canonize (sidoo kale) baadari weyn oo aan u adeegaya diiwaanka madow ee uu pontificate, anigu ma la yaabay, laakiin taag darnaataa.
Dhibaato badan, sheegashada qoraaga waa ay adagtahay in la diido sababtoo ah aan la xaqiijin karin.
Laakiin in baaritaankan loo baahan yahay in la fuliyo hab dhaqameed weyn way isweydiin kartaa. Haddii qoraaga ama tifaftireyaashu ay u maleynayeen inay ku habboon tahay in la geliyo dhammaadka qoraalka liiska qarsoodiga ah ee qareennada ayaa cabsi galin kara. Tani maaha inay dhiirigaliso imtixaanka muhiimka ah ... Dhibaato badan, sheegashada qoraaga waa ay adag tahay in la diido sababtoo ah aan la xaqiijin karin. Qaarkood, sababtoo ah waxay yihiin tiees shakhsi ah - fikrado, xitaa hammered iyo xitaa moodada, ha muujin. Qaar kale maxaa yeelay waxay dareemayaan aragtiyo ku salaysan xiriir, muuqaal, habdhaqan ka baxsan. Ama jarista jar-jaryada, sida "Mgr. Dupond wuxuu ahaa saaxiib la Mgr. Durand, iyo Bishop Durand wuxuu akhriyay qoraa katooliga ah ee Dubois, oo ahaa qarsoodi qarsoodi ah, laakiin uma maleyneynin, sidaasi darteed Bishop Dupond khaniisi ah.
Tixraacyada la'aanta waa dhibaato, iyada oo la tixgelinayo muhiimada ay leedahay arrimaha, xoogga miisaanka iyo qalabka isgaadhsiinta ee buugga. Waanu fahamsanahay doorashadan marka khayraadku uu khatar ku jiro ama marka qofka noolu uu walaacsan yahay, marka qoruhu qorayo buug ama dukumenti adigoon bixin calaamadaha saxda ah iyo calaamadaha jumlada. Mararka qaar wax badan ayaan ku jirnaa codka Da Vinci Code marka laga reebo warbixinta.
Yareynta dabeecadda bani'aadamka ee rabitaankooda galmada - ay muujinayso, qanacsan tahay, la naqdiyo ama la sifeyn karo - waa la soo dejiyey.
Xaqiiqda ah in qoraagu uu ka dhigayo su'aal khaniisiinta ah oo sharaxaad ka bixinaya dhibaatooyinka kaniisadda waa tartan. "Haddii qalabka kaliya ee aad haysato uu yahay mid jilicsan, waxaad arki doontaa dhibaato kasta sida ciddiyaha,". Hadalku tagaa. Waxa hubaal ah in ilbaxnimooyinka wholes (Greece, Japan, Tibet, amarrada diinta, ciidammadiisa, dugsiyada ...), dadkii reer bulshooyinka ku salaysan addeecidda ahaayeen sahla horumarinta xiriirka qaniis ama "bilow" dhallinyaro . Laakiin yaraynta dabeecadda aadanaha in ay rabitaan galmo - muujiyay, qanacsan, cadaadiyo ama sublimated - waa sahlay.
Marka aad aragto khaniisnimada meel kasta oo ay tahayba waxay u noqon kartaa cadaadis. Martel wuxuu sheegayaa in diidmada Kiristaanka "Tixraaca is-dhiibashada" wuxuu noqon lahaa Francis a "Ereyga Coded" waayo, "Iska ilaali khaniisnimada", sidan oo kale "Naqdiga fiqi ahaaneed", taas oo lagu qoslo. Haddii aan illaabino daqiiqad oo ah qoraaga, waxaa laga yaabaa in lagu eedeeyo nacaybka, maxaa yeelay qaababka uu yahay mid daran, nidaam ahaan iyo xiriiriye. Waxay sidoo kale ku biiraan, si iskood ah, kuwa ka mid ah kuwa ugu cadawga badan ee baadari ee hadda jira.
Dhibaatooyinkaan muhiimka ah kama soo horjeedaan xaqiiqda ah in Sodoma ay noqon doonto mid caan ah oo faa'iido leh.
Mararka qaar waxaan ku jirnaa goobta diyaar u ah-in-feker: "Malaayiin daacad ah ayaa ka cararaya kaniisadda sababtoo ah waxay isku raacsan tahay maskaxaha wakhtiyada. " Mararka qaarkood sheegashada qoraaga ayaa midba midka kale burburiya. Joseph Ratzinger? Martel ayaa seegay maskaxdiisa, wuxuu u arkaa sida "Waxtarka" oo wuxuu u cawdaa naftiisa "Faahfaahin" daacadnimo "Weyneeye weyn", laakiin waxa uu aqoonsanayaa meel kale oo baadari ah ayaa ah dhibanaha a "Warbaahinta saxda ah iyo iskutallaabta xagjirka ah". Bertone, gacanta midig ee Benedict XVI? "Waxa uu arkayaa sawirro meel walba, shaqo, cabsi," ayaa qiray qoraaga, oo buugiisa oo dhan uu rabo in uu arko sawirro meel walba, qoryaha iyo cabsida. Nidaamyadani muhiimka ah kama soo saareen xaqiiqda ah laynaga wuxuu sameyn doonaa taariikh iyo in uu yahay mid nabdoon.
ON il MAWDUUC THIS: http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/sodoma-ou-les-secrets-de-famille-du-vatican-19-02-2019-96477_16.php